नेपाल आइडललाई गम्भिर झट्का-अदालतले दियो यस्तो आदेश! के होला अब? | Chautarikhabar
नेपाल आइडललाई गम्भिर झट्का-अदालतले दियो यस्तो आदेश! के होला अब?
प्रकाशित मिति: बुधवार, भाद्र २१, २०७४	समय - १७:५५:२०
तर नेपाल आइडलले भने आफुले आफ्नो नियम र फर्म्याट अनुरूपनै कार्यक्रम नै गरेको दाबी गरेको छ ।